Miteraka fivontosana ve ny lafarinin-kesika? - Entana Novokarina
Tena > Entana Novokarina > Salama ve ny lafarinin-kesika - ny fomba fitantanana
Salama ve ny lafarinin-kesika - ny fomba fitantanana
Miteraka fivontosana ve ny lafarinin-kesika?
voanjobory asianadia oligosaccharides, siramamy izay hita koa amin'ny sakafo hafa toy ny rai, tongolo ary tongolo lay. Satria mifantoka be amin'nyvoanjobory asiana, betsaka izany no tsy maintsy mandalo ny rafitray,niterakaady lava kokoa sy henjana kokoa an'nykibona tsy fitaintainanana.9 des 2019
Ny gazy dia rehefa mahatsapa mivonto na mihalehibe ny vavoninao aorian'ny sakafo. Eny, mety ho famantarana ny aretina mafy izany, nefa mazàna amin'ny zavatra iray amin'ny sakafo no mahatonga izany. Amin'ity lahatsoratra ity dia mijery sakafo mahazatra sasany izay miteraka gazy matotra aho. (lakolosy mikitroka moramora) laharana voalohany, tsaramaso ary voanio.
Ny tsaramaso sy voanio dia samy karazana legume izay misy vitamina sy mineraly be dia be, proteinina, fibre ary gliosida misy fermentable antsoina hoe FODMAPs. FODMAPs, inona no. mijoro, oligo-, di-, monosaccharides ary polyol fermentable dia gliosida fohy mifehy izay manome solika ho an'ny bakteria mahasoa sy mandevon-kanina.
Ho an'ny ankamaroan'ny olona dia tsy miteraka olana dieny izao izy ireo ary afaka manatsara ny fahasalaman'ny tsinay. B. Amin'ny sindrom-bavony mora tezitra, ny FODMAP izay mifanerasera amin'ny bakteria dia miteraka tsy mahazo aina, entona, gazy be loatra, sns.
Ankehitriny, ny mandomoka sy mitsimoka tsaramaso sy voanemba mialoha dia fomba tsara hampihenana ny habetsaky ny FODMAP ao aminy.Raha miteraka fihenjanana ara-pandevonan-kanina mafy ianao dia jereo ny dokotera hanilika ny IBS. Nomera faharoa, zava-pisotro misy gazy.
Ny zava-pisotro misy karbaona dia antony iray hafa mahatonga ny rivotra ho voa ara-dalàna ny rivotra. Rehefa misotro zava-pisotro misy alikaola ianao dia mihinana an'io gazy be dia be io koa, izay mety hiditra ao amin'ny rafi-pandevonan-kanina ary hiteraka gazy tena tsy mahazo aina ary koa kiritika. Laharana fahatelo, varimbazaha.
tosidra ho an'ny vehivavy
Ny varimbazaha dia niteraka adihevitra be tao anatin'ny taona lasa, indrindra satria misy proteinina antsoina hoe gluten izy io. Ho an'ny olona voan'ny aretina celiac na fahatsapana gluten na tsy fandeferana dia miteraka olana amin'ny fandevonan-kanina ny varimbazaha. Anisan'izany ny entona, gazy, fivalanana ary fanaintainan'ny vavony.
Ny varimbazaha koa dia loharanom-pahalalana lehibe an'ny FODMAP izay, araka ny voalaza tetsy aloha, dia mety hiteraka olana amin'ny fandevonan-kanina amin'ny olona maro. Ankehitriny ny varimbazaha dia avo indrindra amin'ny vondrona FODMAP antsoina hoe fructans. Laharana fahefatra, tongolo lay ary tongolo.
Raha miresaka momba ny varimbazaha sy ny fructans, ny tongolo lay sy ny tongolo koa dia misy fructans legioma be dia be. Noho io dia betsaka ny olona matetika no miaina entona sy olana mifandraika rehefa mihinana iray na maromaro amin'ireo legioma ireo, indrindra amin'ny habetsahana. Tadiavo ihany koa ny vovoka tongolo lay sy tongolo, izay akora mahazatra amin'ny sakafo matsiro sy tsiranoka ary saosy maro.
Eny, mety hitondra anjara biriky amin'ny entonao koa ireo. Laharana dimy, alikaola siramamy. Ny alikaola siramamy dia singa voajanahary ampiasaina hanoloana ny siramamy amin'ny sakafo tsy misy siramamy sy siligaoma.
Xylitol, sorbitol, ary mannitol. Ny alikaola siramamy dia FODMAP ihany koa, indrindra ireo polyol. Ny fihinanana alikaola siramamy be dia be ankehitriny dia mitondra amin'ny entona, aretin-kibo ary fivalanana tokoa, raha mitady fonosana siligaoma na mints tsy misy siramamy ianao dia ampitandremana ianao ny amin'ny vokatra laxative raha mihinana be loatra.
Laharana enina, vokatra vita amin'ny ronono. Farany, te hiresaka vokatra vita amin'ny ronono aho, izay zavatra toy ny ronono, yaorta, fromazy, fromazy fanosotra, ary dibera. 75% eo ho eo ny mponina Ny ldose dia tsy afaka mamaky lactose, ny siramamy hita ao anaty ronono.
Ity toe-javatra ity dia fantatra amin'ny tsy fandeferan'ny lactose. Ka raha tsy mahazaka lactose ianao, ny vokatra vita amin'ny ronono dia mety hiteraka olana amin'ny fandevonan-kanina mafy, toy ny gazy, gazy, kiritika ary fivalanana. Hevitra hanandramana sakafo tsy misy lactose mandritra ny herinandro na mihoatra raha toa ka mihatsara ny entonao.
Raha manana olana amin'ny gazy ianao dia ny iray amin'ireo sakafo na vondrona sakafo ato amin'ity lisitra ity no meloka. Tsy misy antony tokony hialana amin'ny sakafo rehetra ato amin'ity lisitra ity afa-tsy ireo izay mahatonga anao hanana olana manokana. Raha misy fiatraikany amin'ny fomba fiainanao sy fiainanao ny fivontosanao dia manatona ny dokoteranao hahalalanao ny antony.
Misaotra nijery. Hamarino tsara fa omeo thumbs up ity lahatsoratra ity raha hitanao fa mahaliana azy ary aza adino ny misoratra anarana amin'ny fantsona YouTube an'ny Nutrice Authority amin'ny fipihana ny bokotra mena Subscribe eto ambany amin'ity lahatsoratra ity. (mozika malefaka sy mampisondrotra)
Manatavy ve ny sipa?
Na eo aza izany, sakafo ara-pahasalamana mampino izy ireo mba hampidirina amin'ny sakafonao.voanjobory asianamisy kaloria antonony ary be fibre sy proteinina, fananana rehetra mandray anjara amin'ny fitantanana lanja.7 Mey 2018
Inona no antsoina hoe legume legume manondro ireo voankazo na voan'ny legume legume? Nopotehina ho any amin'ny fizarana isan-karazany ao anatin'izany ny tsaramaso, voanemba, voanjo ary voanjo, misy antony maro tsy tokony hihinanantsika legume ary izany no hidirantsika izao hitsaharana manohitra ny otrikaina dia mety hiteraka aretina autoimmune Slektins koa proteinina tsy azo levona izany dia tsy miova amin'ny tsinay amin'ny be dia be. Izy ireo dia afaka manimba ny rindrin'ny tsinay ary mahatonga ny sakafo hanondraka amin'ny alàlan'ny sakafo dia tokony ho eo mba hamalian'ny vatana amin'ny alàlan'ny fandoroana ny fivontosana mandritra ny fotoana fohy dia valiny mety, fa raha manohy mihinana sakafo be dia be amin'ny lectin isan'andro ianao dia tsy ho simba mihitsy ny fahavoazana. amboarina ary ho lasa mamaivay maharitra ianao.
Ny lectins koa dia mifamatotra amin'ny mineraly toy ny vy, ny zinc ary ny varahina izay tsy azon'ny vatanao entina ao anatiny Phytoestrogens dia akora simika voajanahary izay mety hanakorontana ny rafitra endocrine ao amin'ny vatana. Manahaka ny estrogen ao amin'ny vatana izy ireo ary mety hiteraka olana maromaro izany. Ny antony manaraka dia hoe ambany ny kalitaon'ny proteinina - ny proteinina amin'ny legum dia tsy mora entin'ny vatana toy ny avy amin'ny loharano hafa, koa raha mihinana gr mitovy ny gr dia omeko noho ny grama, satria andao atao hoe omby , tena tsy dia misy loatra amin'ireo legioma ireo ianao, ny legioma hen'omby dia ambany ihany koa amin'ny asidra amine sasany, ka mahatonga azy ireo tsy ho feno proteinina.
Ny antony manaraka dia satria be fibre izy ireo ary mety hieritreritra ianao fa zavatra tsara ity noeritreretiko fa ilaintsika dia mila fibre betsaka ny fibres ao amin'ny sakafontsika izay manampy hampiroborobo fa tsy dia mila fibre loatra isika. Tsy ilaina izany ho an'ny olombelona , mihinana ny fibre izy ireo dia tsy azo levona, mandalo amin'ny sisin-tsika io nefa tsy levona, fa ny bakteria ao amin'ny tsinay dia afaka mandevona fibre na tokony hiteny aho hoe fermenté ferment mba hidiran'ny fibre ao amin'ny zanatany sy ny entantsika ho vokatra azo avy amin'ny fanamasinana. novokarina. Mety hiteraka entona mandevon-kanina io ary tena fantatra fa ny tsaramaso dia miteraka entona. Ny fihinanana fibra betsaka dia mety hahatonga ny soritr'aretinao ho ratsy kokoa ary rehefa dinihina tokoa, ny lagon dia tsy dia mahavelona.
Jereo ny mombamomba ny tsaramaso, tsy dia maninona izy ireo, tena loharano n'inona n'inona, angamba Ny ampahany tsara indrindra amin'izy ireo dia ny fananany vy marobe. Ny olana dia tsy vy heme io izay manana taham-pifamoivoizana maharatsy hanombohana azy ary satria, araka ny efa nolazaiko tetsy aloha, dia misy anti-otrikaina izy ireo izay manakana bebe kokoa ny fandraisana ka tsy dia mahazo vy betsaka araka ny fiheveranao anao. Heveriko ve fa mahamenatra fa ny legioma dia heverina ho salama rehefa tena tsy dia tsara loatra. tadidiko fa nanao an'ireny burger tsaramaso mainty ireny foana aho satria noheveriko fa mahasalama kokoa noho ny fananana burger hen'omby dia avelao aho hahafantatra izany amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany inona ny zavatra niainanao tamin'ny legume.
Tianao ve izy? mbola mankahala azy ireo ve ianao mbola mihinana azy? Efa nesorinao tsy ho sakafony ve izy ireo, azafady mba ampahafantaro ahy eto ambany misaotra ry zalahy nijery ary hahita anao aho amin'ny manaraka
Voahodina ve ny lafarinina?
Raw sylafarinin'akoholahy voahodinatoa misy lanjany mahavelona raha oharina amin'nyfandrendrikavarykoba tsara toto, na dia mahazatra azafanodinananysakamalaony voamaina dia misy fiantraikany amin'ny firafitry ny simika an'nykoba tsara toto.3 Mey 2019
Dimy amby roapolo taona lasa izay, zara raha nisy mpamboly tany Amerika afaka namboly ireo zavatra ireo. Androany izy ireo dia tsy afaka mampiditra azy ireo haingana amin'ny tany. Fa maninona Hummus! OK! Ka aleo ahitsy ny raharaha: zana-borona ity.
Garbanzo ity. Mitovy izy ireo! Raha efa nahita an'ity seho ity ianao izao, dia fantatrao fa tiako ny mankamin'ny faran'ny anaran'ny sakafo iray. Ka niresaka tamin'ny manam-pahaizana manokana momba ny zana-borona aho: tantsaha, mpiompy, mpamboly agronomista.
Ary tsy misy olona afaka manazava ny antony mahatonga an'i Amerika irery firenena miteny anglisy mampiasa ny anarana Espaniola garbanzo. Fa manana teôria iray aho: ela be talohan'ny nihinanan'ny Amerikanina ny hummus, ela be talohan'ny nidirantsika tao anatin'ireo sipa lehibe maniry dia fantatsika fotsiny hoe tsaramaso am-bifotsy ireny. Ary ireo tsaramaso am-bifotsy ireo dia avy any Mexico.
Ny chickpeas dia feno proteinina. Izy ireo dia starchy sy mameno. Izany no nahatonga azy ireo ho ivon'ny lakozia be dia be.
India dia maniry felam-borona betsaka kokoa noho ny ambin'izao tontolo izao. Azonao atao ny mahita azy ireo amin'ny stews toa an'i Chana Masala. Fa ilay zana-borona kosa - iray amin'ireo sakafo fambolena tranainy indrindra eto an-tany - dia avy any Moyen Orient.
Avy any Ejipta ka hatrany Israely ka hatrany Libanona. Ny lovia Chickpea toy ny falafel sy hummus dia hita hatraiza hatraiza d ho an'ny choppeas dia 'hummus'. Rehefa nanomboka niroborobo ny indostrian'ny zana-pasika tany Amerika tamin'ny taona 1990 dia nalefa tany ampitan-dranomasina ny ankamaroan'ny vokatra.
Saingy izao dia nitombo ny fanjifana ao an-trano. Ny faniriantsika hummus - zavamaniry tsy misy gluten, puree an'ny choppeas - dia midika fa be dia be ny vokatra no ampiasaina eto an-trano. Ka mitondra fiara mankany afovoan'ilay firenena zanaka zana-borona aho, manamorona ny sisin-tanin'i Washington-Idaho, izay ahitan'i Sabra, mpamokatra hummus malaza any Amerika, ny 100% amin'ireo akorany. dia namboly vondrom-piompiana fianakaviana - mpikambana rehetra ao amin'ny Koperativa tantsaha avaratra andrefan'ny avaratra.
Antsoina hoe Palouse ity toerana mahafinaritra ity. Ankehitriny dia rakotry ny tanimboly izy io, saingy ahitra avokoa izy rehetra taloha ary soavaly Appaloosa malaza azy ireo. Tamin'ny alàlan'i Abraham Lincoln, ny lalàna momba ny Homestead dia nanokatra hektara an'arivony amin'ireo havoana ireo ho an'ny mpivahiny.
Ary tamin'ny 1920 dia fantatra amin'ny hoe harona varimbazaha manerantany izy io. Ny mpamboly eto dia mbola mamboly varimbazaha betsaka ihany; Fa izy ireo koa dia loharanom-borona akorandriaka farany ambony. Tsy dia mila rano kely ny chickpeas - izay mahatonga azy ireo ho tonga lafatra amin'ny tany karankaina Palouse.
Tsy tena manondraka ny tantsaha eto! Tsy mila an'izany izy ireo: lalina sy manankarena ireto tany ireto. Izy ireo dia mitazona ny rano tsy hianjera amin'ny ririnina sy ririnina, ary izany dia mitazona ny zana-borona mandra-pijinjana, rehefa tena tian'ny tantsaha ho maina ilay zavamaniry. Saingy hiverina indray isika amin'ny fotoana fohy.
Eny, ny voromailala dia antsoina matetika hoe tsaramaso. Fa toy ny tsaramaso rehetra, ny sifoka dia voa tokoa! Izy ireo dia voan'ny legume. Inona no atao hoe legume? Anisan'izany fianakaviana izany ny voanjo, ny soja ary ny pitipoà maintso, izay sakafo hohanintsika maniry ao anaty vilany iray, ary izany indrindra no itomboan'ny trondro: iray, angamba roa, isaky ny pod kely! Fa alohan'ny hisian'ny polony dia tsy maintsy misy ny zavamaniry! Hihaona amin'i Travis Grieser aho, izay tantsaha tany am-boalohany ny razamben'izy ireo.
Travis dia nifamadika teo anelanelan'ny varimbazaha, orza sy zana-borona tao amin'ny tanimbariny 2200 hektara niasa tany amin'ny toeram-pambolena antonony iray tamin'ireo faritra ireo! Tamin'ny volana aprily dia namaky voan-kesika 700 hektara i Travis. (Nicole): Ka ny zana-borona kely izay nohaninay ihany no namboleko? (Travis): Eny, voa io saha io, ka (Nicole): Oh! Ireo dia nambolena ho masomboly hijinja amin'ny taona ho avy! Ny chickpeas dia mety hitovy endrika amiko sy amiko, saingy misy karazany an-jatony raha tsy an'arivony maro, ireo nobeazin'i Travis ho an'ny Sabra dia fantatra amin'ny endriny malefaka sy ny tsirony mofomamy. ary kely kokoa noho ny sifotra am-bifotsy.
Andao andramo ny maintso. Lasa izao. Mama, oh, mahafatifaty tokoa.
Tena tsara lavitra noho ny voanjo maintso satria misy voan'akasy. Ry vahoaka, raha fantatrareo ny maha-matsiro an'io dia mangataka zana-trondro maitso daholo isika. Tsy dia manelingelina eto ny zava-maniry chickpea.
Izany dia satria ny zava-maniry dia manafina asidra amin'ny alàlan'ny fihary malemy toy ny volo izay manarona ny vala sy ny tahony. Tsy manimba olona ny asidra, fa raha mitafy izany amin'ny fitafianao ianao (Travis): Eny, nanana namana iray aho izay nanao pataloha intelo na inefatra tany an-tsaha, avy eo te-hanasa azy, ary izy raha ny marina dia misy lavaka mihinana amin'ny tongony pant. (Nicole): Rehefa maina ny zavamaniry dia ritra ity asidra ity.
Saingy mahatsapa zavatra kely miraikitra amin'ny rantsan-tànako aho. (Travis) Ie. (Nicole): Mety tsy tokony hososihiko izao.
Mamboly sy mibontsina ny zavamaniry mandritra ny fahavaratra mandra-pahatonga azy ho mafana sy maina be ka manomboka mihidy ilay zavamaniry. Amin'ny volana septambra dia masaka ao anaty sombin-trondro ny zana-borona ary maina any an-tsaha Izay tian'ny tantsaha: raha tratran'ny hamandoana be loatra izy ireo dia ho lo ao anaty kaontenera fitehirizana. Mampientam-po ny fijinjana eto.
Ny havoanan'i Palouse dia mideza. Ny mpijinja mitambatra dia manao zavatra roa: manapaka ny zavamaniry izy ary mively anao - izany hoe mandroaka ny trondro avy ao am-bala. Ny tantsaha faha-efatra Doug Stout dia kintana bitika kely amin'ireo faritra ireo - nahazo loka nasionaly izy noho ny vokatra ambony azony.
Saingy tsy miezaka fotsiny izy ireo hahazo habetsahana - mila kalitao izy ireo, koa ny tena manan-danja kokoa noho ny habeny dia ny lokon'ireo sipa. Tokony ho akanjo fanamainty sy feno fanosotra daholo izy rehetra - izany no itiavantsika ny hisehoan'ny hummus antsika, ary ny loko mety ho azy ireo dia tian'ny Mpamboly: Raha tsy mahomby izy ireo, dia azo hahena ny zana-trondro - midika izany fa kely ny vola azon'izy ireo na azo lavina izy ireo. mivantana. Inona no misy fiatraikany amin'ny loko? Raha mbola mioty ny zanany vavy i Doug dia manapaka ny tsimparifary rehetra any an-tsaha sy ravina afaka manaloka ny zana-borona kosa mainty rehefa mandalo mitambatra ny zava-drehetra ary mifangaro.
Ka izao dia tena fotoan'ny fahamarinana: Moa ve i Doug nifehy ny tsimparifary tany an-tsahany? Saika ho hitantsika izao! Ny mitondra fiara mitambatra no toerana tsara indrindra tokony hisy - raha ny mpaka sary ataoko dia tototry ny rahon'ny vovoka atsipitsika, izaho dia ao anaty lavaka kely misy fialofana. Na mafy toy ny ahoana aza ny fiakarana hidina amin'ireo havoana avo indrindra, dia mbola nahatsapa ny foko tao am-bavako ihany aho. OK, mitsangana tokoa isika ka voatery manindry ny tongotro hipetraka hatrany! Mino i Doug fa mijinja antsika ny saha, mety ho mpanapaka firaketana.
Ary tsy maintsy lazaiko fa mitovitovy amin'ny ahidratsy izany -free.Woohoo! Tsy tiako hijanona izany. Navelako handeha izy, ary raha vao manomboka manenina aho fa tsy tao ambadiky ny kodia ny tenako dia nahazo antso avy amin'ny namako Travis aho, ary namoaka ny mpijinja azy izy - mpanangom-bokatra kely iray izay tsy miondrika ho azy ny lohany miaraka amin'ny tany.
Ary manana toerana fisaka mahafinaritra izy io hozahako andrana! e aho ho an'ny lesona haingana. Betsaka kokoa ny zavatra tokony harahi-maso sy ahitsy amin'ity fitambarana ity. Ny tenako ihany manandrana azy amin'ny farany.
Izaho irery no ao an-tsaiko. Hey, farafaharatsiny mba tsy nahatratra ny alik'i Travis aho. Sarotra ny hino fa ny indostrian'ny felam-borona mipoaka saika nipoaka teto talohan'ny nanombohany.
Rehefa nipoitra voalohany tao Palouse ny akoraha tamin'ny 1980, dia holatra no namono azy ireo. Saingy teraka indray ny indostria noho ny fanomezana santionan-trondro avy any Syria! Izay efa nitanan'izy ireo karazana izay tsy mahazaka io lo io manokana.
Ny mpiompy ao an-toerana dia namerina azy ireo tany amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Pasifika izay niampitan'izy ireo karazana hafa. Ity iray ity dia namelana tamin'ireto sipa ireto! Raha jerena ny faharavana rehetra nandalo teto amin'ity firenena ity. Ary tiako fa sipa kely - ny fototry ny hummus, sakafo eo afovoan'ny sakafo Afovoany Atsinanana.
Heveriko fa fotoana mety izao hanazavana zavatra ho antsika izay tsy ao Moyen Orient: Hummus dia betsaka lavitra noho ny noeritreretinao azy. Araho ao an-dakozia aho
Hummus dia mihoatra lavitra noho ny tsakitsaky fotsiny. Any Moyen Orient Matetika ny sakafo, ary izany no tiako hihinanana azy: toy ny mpandray anjara lehibe amin'ny lovia, toy ny hoe mieritreritra paty ianao, raha ny tena izy. Androany aho hanomboka amin'ny hummus mahazatra an'i Sabra - angamba namboarina tamin'ny akoho kely izay nanampiako hijinja - ary hoentiko miaraka amin'ny legioma natsatsika sy pesto voatabia hain-masoandro maina io.
Dipoavatra lakolosy, zucchini, ary baranjely no ampiasaiko, fa ny legioma tianao indrindra dia azonao ampiasaina. Afangaro amin'ny menaka oliva, sira ary dipoavatra ary atsatsiho amin'ny lafaoro amin'ny 425 ° F mandra-pahalemy sy malefaka, 30 minitra eo ho eo. Ataovy ao anaty mpanodina sakafo ny pesto voatabia maina anao.
Mampiasa voatabia maina, persily, basilisa, tongolo lay, ranom-boasarimakirana ary sira kely ianao. Afangaro amin'ny menaka oliva 3 sotro ny zava-drehetra. Tiako ny mampiasa ireo zavatra izay mivoaka avy ao anaty siny voatabia maina masoandro.
Tianao ho saosy izay mbola somary madinidinika amin'ny fomba fahandro feno sy ny refy rehetra, jereo ny famaritana lahatsoratra YouTube etsy ambany. OK, izao ndao hiara-hametraka azy rehetra. Apetraho eo ambanin'ny viliao ny hummus.
Ary alao antoka fa mari-pana ny efitrano; tsy mangatsiaka ivelan'ny vata fampangatsiahana. Sotro eo afovoany ny pesto voatabia. Aparitaho manodidina ny legioma mafana.
Angamba perilley maniry. Ary ny pinch voanjo kesika iray dia tsy handratra.
Mampitombo siramamy ao anaty rà ve ny lafarinin-tsaketa?
Lafarinina chickpeana chana attadiafibre tsy voavaha izay tsy mampihena fotsinyrakolesterolaambaratongafa koa manampy amin'ny fidirana miadana nysiramamymankany amin'ny lalan-drà, mahatonga nyhaavon'ny siramamy ao amin'ny rahitsangana miadana. Hamarino tsara fa manatona ny dokotera alohan'ny hifindranao any amin'ny dokotera ianaokoba tsara totovoalaza eto izany.
Mizarà amin'ny media sosialyo. Betsaka ny olona matavy loatra sy diabeta no tena mila an'ity fampahalalana ity ary afaka manampy ahy hahazo izany ianao, koa tsindrio fotsiny ny bokotra fizarana ary avy eo safidio ny haino aman-jery sosialy, okay izao ny zavatra manan-danja indrindra mampiakatra ny tahan'ny insuline anao.
Mazava ho azy fa ny laharana voalohany dia miharihary ary izany dia ny siramamy gliosidra tsotra maty izay karazana karbohidraty rehetra, na varimbazaha, na katsaka, na sakafo voahodina izay tonga ao anaty boaty dia mety hampitombo ny tahan'ny insuline anao ary tsy tianao hampidirina ao izany ny sakafonao Rehefa manandrana mahatratra ketosis ara-tsakafo misy dikany dia gaga ny olona maro izay mieritreritra fa tsara ny proteinina ary maro ny olona mieritreritra fa raha mihinana sakafo karbôtika ambany izy ireo dia midika izany fa hihinana sakafo proteinina be izy ireo, ary izany dia tsy marina izany, raha mihinana proteinina be loatra ianao dia hampisondrotra ny tahan'ny insuline anao ary hampiala anao amin'ny fifadian-kanina tsy tapaka raha manandrana mifady hanina ianao ary hampiala anao amin'ny ketosis mahavelona raha manandrana hahatratra an'io ianao . Tadidio fa voafitaky ny maro amin'ireo 'manampahefana' eran'izao tontolo izao isika momba ny habetsaky ny proteinina ilaintsika isan'andro mila asidra amine tena ilaina ny vatanao, tsy misy isalasalana izany, fa ny totalin'ny proteinina kosa dia tena be loatra matetika rehefa be loatra manandrana milaza aminay hoe ohatrinona ny proteinina ilaintsika isan'andro ny manam-pahaizana ka alao antoka fa mahazo proteinina be dia be koa ianao amin'ny zavatra manaraka izay tena mahasalama tokoa, saingy afaka mampitombo ny insuline anao izy ireo, dia ireo voankazo voankazo sy legioma efa masaka loatra, koa andao hiresaka izany tsirairay avy, raha mihinana paoma manta ianao, misy siramamy io paoma io, fantatsika rehetra fa misy koa fibre izay mampiadana ny famoahana ny siramamy ao amin'ny vatanao. Noho izany, ny fihinanana paoma dia voajanahary, mahasalama izy io, tsara ho anao izany, fa hampiakatra kely ny tahan'ny insuline anao koa izay no mahatonga anao rehefa mitady ketosis amin'ny sakafo ianao dia tokony hitandrina be koa. ny voankazo, na dia voankazo voajanahary vaovao aza, dia hampitombo ny insuline anao noho ny siramamy ao anatiny. Miezaka ny hahazo ketosis amin'ny sakafo aho, tsy maintsy avelako hivoaka izany na hamoaka ahy amin'ny ketosezy, okay izao ny legioma nandrahoina farany, raha mihinana broccolite manta ianao, dia ambany dia ambany ny index glycémie ao aminy fa ho an'ny olona maro dia tsy zakan'izy ireo izany amin'ny ketosis ary io dia iray amin'ireo legioma index glycemika ambany izay tsara hohanina raha manandrana ianao Mijanona ao anaty ketosis amin'ny sakafo, fa raha maka broccoli mitovy ianao ary mahandro azy eo am-patana mandritra ny andro toy ny nahatsiarovan'ny renibenao izany broccoli malemy izany ary i R.
Ny sotro dia toy ny henan-kena, efa nopotehinao daholo ny fibre ary mety hanjary ho starch ireo zavatra ireo raha masaka mafy loatra ary mandrotsaka ny fatran'ny insuline ao amin'ny lalan-drào ka aza be loatra ny masonao, manandrama manetasa azy ireo manta na somary maivana izy ireo mba hihinana ka mbola afaka mitsako ihany raha tsy crispy ary ny manaraka be loatra dia ny adin-tsaina ratsy kokoa ary tsy maintsy manavaka ny adin-tsaina tsara sy ny adin-tsaina ratsy aho satria amin'ny voalohany dia tsy azon'ny ankamaroan'ny olona ny fahasamihafana. Ohatra iray amin'ny adin-tsaina ratsy dia ho an'ny Ny fiasana sefo iray mankahala anao amin'ny asa halanao ary tsy maintsy ataonao dimy andro isan-kerinandro ary tsy faly sy matahotra ary tezitra foana dia tsy fihenjanana tsara Raha tena mampiakatra ny tahan'ny insulinao ary manelingelina ny tombontsoa ara-pahasalamana rehetra ianao d Amin'ny fanovana ny sakafonao dia te hanana ohatra amin'ny adin-tsaina tsara i Raha manandrana mianatra mianatra miloko na mianatra mitendry piano ianao na mianatra fanatanjahan-tena na fahaizana na fialamboly vaovao ary fantatrao ny filalaovana basikety pickup miaraka amin'ny namanao dia manahirana ny vatanao, saingy ny fihenjanana tsara satria mampiroborobo ny fanavaozana, ny fiterahana indray ary ny fitomboana, tsara ho an'ny atidohanao satria manamboatra làlam-pandehanana vaovao ianao, izay adin-tsaina tsara ary raha ny hevitro manokana dia lavitra toy ny mihazakazaka antsasaky ny marathon sy marathon feno izay tapaka-na mety ho adin-tsaina ratsy loatra aza izay fihenjanana miverimberina loatra amin'ny vatanao ka tandremo sao adin-tsaina ratsy ary esory amin'ny fiainanao ny fahalalana hoe avy aiza ianao izao izay mety ho toa tsy ho vita nefa azonao atao izany okay ny farany ary maro, marary maro no tsy mahalala an'izany ary na dokotera maro aza tsy mahalala, fa misy ny iray fanadihadiana natao dia mampiseho fa tsy ny fihetsika insuline ihany no rehefa mihinana siramamy sy starch ianao ary miditra ao aminao izy ireo lalan-dra, misy ihany koa ny antsoina hoe haavon'ny insuline cephalic, ary izany no fiasa, tamin'ity fandinihana ity dia naka vondrona ankavia izy ireo ary vondrona iray avy eo ankavanana ny vondrona teo ankavia nanana rano siramamy ny vondrona teo ankavanana nanana rano siramamy samy nanandrana mamy kokoa dia samy manana kaloria ary ny iray izao tsy manana kaloria velively akory tsy nampisotro ny ranon'ireo mpandray anjara tamin'ity fandinihana ity, fa nanasa azy teo am-bavany nandritra ny fotoana iray fotsiny ary avy eo nandrora ilay ranoka rehefa azonao fa tsy nanao izany ianao t atelina azy, tsy nahatratra ny vavoninao izy, tsy niditra tao amin'ny làlandranao akory izy io, tsy natsofoka tamin'ny alàlan'ny fonosana moka tao am-bavanao raha eritreretinao izany, ary eritreritra tsara izany raha nieritreritra ianao noho izany, saingy tsy izany no fiasan'ireto molekiola ireto fa lehibe loatra ka tsy ho zakaina amin'ity fomba ity fa ny vondrona roa kosa dia nitifitra tamin'ny insulàn'ny rà na dia tsy natelina ilay ranona mamy aza ka ny isa dimy dia mila mitandrina amin'ireo zavatra izay mamy, na dia raha tsy misy siramamy dia tsy misy kalsiôma misy kalsiôma tsy misy kaloria, raha manandrana mamy izy ireo ary misotro ianao ary misotro be loatra amin'izy ireo, dia hatosika kely ny insulina anao ary afaka manala anao ketosis ara-tsakafo ary izany dia afaka mamoaka anao amin'ny fifadian-kanina, raha toa ianao ka manandrana mifady hanina ka ireto misy zavatra dimy tokony ho fantatro, azafady maka fotoana fohy hisoratana anarana amin'ity fantsona ity ary kitiho ny lakolosy kely hampahafantatra anao isaky ny manana hevitra tsara aho, dia ataovy ho iray amin'ireo voalohany hahalala, misaotra Topy Maso Eran
ny fomba fanamboarana derailleur
Tsara ve ny lafarinin-kesika raha mampihena ny lanjany?
Lafarinina chickpeadia aLEHIBEsolon'ny varimbazahakoba tsara totoraha manandrana mampihena ny fatran'ny kaloria ianao. Raha ampitahaina amin'ny fanompoana ny voamaina voadio ihanykoba tsara toto, Kapoaka 1 (92 grama) an'nylafarinin-kesikamanana kaloria 25% latsaka. Midika izany fa tsy dia matevina ny angovo (1).1 Mey 2019
Inona no mitranga raha mihinana akoho be loatra ianao?
Raha ianao'ary mandrakizaynihinana sifoka be dia beamin'ny toerana iray,ianareoMety efa niaina izany fahatsapana izany mihitsy. Tsy lazaina intsony, feno legioma ny legume, izay gliosida tsy mety simba ihany koa ary miteraka fivontosana sy gazyraha misakafoamin'nyKOAbe ny habetsany.15 mart 2021
Fa maninona ny pitipoà no ratsy aminao?
Tsy tokony hihinana manta ny olonavoanjobory asianana pulsa manta hafa, satria misy poizina sy akora sarotra resahina. Na masaka azavoanjobory asianamanana siramamy saro-bidy izay mety ho sarotra ny mandevona ary hitarika ny entona sy ny tsy mahazo aina amin'ny tsinay. Ampidiro tsimoramora ao anaty sakafo ny tsaramaso mba hahafahan'ny vatana zatra.
Afaka manampy ny lanja ve ny sipa kely?
voanjobory asianadia manan-karena amin'ny proteinina sy ny fibre, samy izy roafanampiana lanja very. Ny fibre dia mitazona anao ho feno ho an'ny lava kokoa ary ny proteinina mahavoky ny hanoanana.17 nov 2017 Novambra
Salama tsara kokoa ve ny lafarinam-bary raha oharina amin'ny lafarinina tritika?
Lafarinina chickpeadia mpisolo toerana tena tsara ho an'nylafarinina varimbazaha. Manana atsara kokoamombamomba ny otrikainanoho nyfandrendrikakoba tsara toto, satria manome vitamina, mineraly, fibre ary proteinina bebe kokoa saingy vitsy ny kaloria sy ny karbôde.1 Mey 2019
Manao ahoana ny tsiron'ny lafarinina trondro?
Lafarinina chickpea, fantatra koa amin'ny hoelafarinina tsaramaso garbanzonamanoroka izy ireo, vita amin'ny tany, mainavoanjobory asiana. Izy io dia manana tsiro tsy mitongilana, somary moka, somary 'bean-y' izay manome azy tsara amin'ny sakafo matsiro sy mamy.15 nov Desambra 2019
Iza ny lafarinina zana-borona mahasalama na lafarinina tritika?
Vita amin'ilay tsaramaso voaaroina tsara, ny lafarinin'akena dia ambany kaloria sy karbôzy noho ny karazana varimbazaha manontolo. Be proteinina koa izy io, misy 21 grama isaky ny kapoaka. Tsindrio raha hijery ny valiny feno.
Mety ve ny mihinana lafarinam-borona amin'ny sakafo keto?
Ny lafarinina chickpea dia feno otrikaina mahasalama. Izy io dia safidy tsara indrindra amin'ny lafarinina varimbazaha voadio, satria ambany kokoa amin'ny karbôzôra sy kaloria izy io nefa be proteinina sy fibre. Ankoatr'izay, avela hihinana keto ve ny lafarinam-borona? Ny lafarinina chickpea dia be proteinina sy fibre. Ny lafarinina chickpea dia manao safidy lafarinina karba ambany na keto tsara.
Firy ny karbaona ao anaty kaopy ao anaty lafarinin-kesika?
Koba iray (92 grama) ny lafarinin-trondro dia misy (1 loharano azo itokisana): 1 Kaloria: 356 2 Protéine: 20 grama 3 Fat: 6 grama 4 Karbôtes: 53 grama 5 Fiber: 10 grama 6 Thiamine: 30% amin'ny Fandraisana anjara isan'andro (RDI) 7 Folate: 101% an'ny RDI 8 Iron: 25% an'ny RDI 9 Phosphore: 29% an'ny RDI 10 Magnesium: 38% an'ny RDI Bebe kokoa